USAPHO NGU-A LAWYER
Ngoko ke ukuba Ufuna kwi nzima ubomi imeko enxulumene isigqibo abo okanye ezinye usapho imbambano, nceda uqhagamshelane izakhono isemthethweni inkxaso iwebsite yethu. Uza kukwazi ukucela lawyer malunga nawuphi umba unomdla usapho iingxaki, kwaye kanjalo ukukhetha ilungelo lawyer bangayi kuphela amele Yakho umdla kwi-enkundleni, kodwa iya kananjalo ukunceda ukwenza ibango, ihlanganise zonke ezifunekayo inkundla amaxwebhu kwaye khetha echanekileyo yobomi intshukumo ngaphakathi enkundleni.
Ukuba ufuna ukuba ikhusele ilizwe labo umdla kwi-isisombululo ka-kunzima usapho iingxaki, hayi incur ngakumbi-mali ilahleko kwi-wokuqhawula umtshato, yeka abantwana okanye ukukhusela ngokwabo ukusuka kwaye ungcungcuthekiso ye-mlingane, kufuneka usebenzise iinkonzo i experienced lawyer neyokusebenza usapho umthetho imicimbi.
Ngomhla wethu site ungafumana ingcali ingcebiso kwi nawuphi na umcimbi enxulumene usapho imiba, ukufunda umdla lombhali upapasho kwaye iindaba, kakhulu ngokukhawuleza ukufumana i-experienced lawyer abo baya amele Yakho umdla kwi-inkundla. Kwezi kwiimeko usoloko ufuna idwaalkraal uncedo. Ngomhla we-kwiwebhusayithi yethu ethi unako ukufumana inkxaso experienced abaqondisi-mthetho abo baya ukunceda ukukhusela amalungelo Akho kwi-isisombululo osapho disputes.
Neeyantlukwano phakathi zolwaphulo Mthetho Meko kwaye Zasekuhlaleni Meko